Mponin’i Hong Kong Maniry Ny Hiarovan’ny Lalàna Ireo Angon-drakitra Momba Azy Ao Anaty Findainy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2015 7:51 GMT
Hetsi-panoherana ho fiarovana angon-drakitra momba ny tena manokana, Unter den Linden, Alemaina. Sary avy amin'i Lindsay Eyink, mpampiasa Flickr (CC: AT)
Ela ny ela, nohazavain'ny tomponandraikitra ambony avy ao amin'ny mpitandro filaminana ao Hong Kong ny dingana mifehy ireo fangatahana fampiharana ny lalàna mahakasika ny angon-drakitra “metadata” momba ireo mpampiasa alefa ho an'ireo mpanome tolotra aterineto. Ankehitriny isika mahafantatra tsara fa misy dingana tsy araka ny lalàna itondrana ny fangatahana angon-drakitra momba ireo mpampiasa aterineto ao Hong Kong Now. Mitarika ho amin'ny fanontaniana hoe : Tokony ho afaka tokoa hijery ny ango-drakitra momba antsika, nefa tsy ambany fanarahamason'ny fitsaràna, ve ireo masoivohon'ny governemanta?
Lai Tung-Kwok, Sekretera misahana ny filaminana ao Hong Kong, niteny tao amin'ny fivorian'ny Filankevitry ny Mpanao Lalàna tamin'ny 29 Aprily fa azon'ireo masoivoho mpampihatra lalàna atao ny mangataka izay ilainy momba ny angon-drakitry ny mpampiasa (toy ny arana'ny kaonty, ny adiresy IP ary ny fomba fidirana aminy) eny anivon'ireo manome ny tolotra mba hikarohana vavolombelona, porofo na olona ahiahianay rehefa manadihady tranganà heloka bevava. Iklaina fotsiny ho an'ny fangiazana fitaovana fifaneraseràna sy antontan-taratasy ireo didy avoaka, ary tsy misy didy natao ho an'ny fangatahana angon-drakitra. Midika izany fa tsy misy fanarahamason'ny lalàna tamin'ireo fangatahana ny mombamomba ireo mpampiasa niisa 23.946 navoakan'ny Polisin'i Hong Kong sy ny Departemantan'ny Fadin-tseranana sy ny Hetra tato anatin'ny dimy taona lasa.
Toy ny mino ireo manampahefana amin'ny fampiharana ny lalàna fa hoe tsy saropady ny metadata, na ny angon-drakitra “tsy votoaty”. Saingy amin'izao vanim-potoanan'ny teknolojia maoderina izao, afaka milaza zavatra marobe moba ny olona iray ny metadata. Ny fomba fidirana amin'ireo tranonkala amin'ny fampiasàna ny mombamomba ny tena sy ny adiresy IP, ohatra, dia afaka milaza amin'ny polisy rehefa miditra aminà toerana iray natao hifampiresahana ianao ary ny faharetan'ny nijanonanao tao amin'ilay sehatra. Miaraka amin'ny fanampian'ireo mpanome tolotra aterineto, azon'ny polisy atao ihany koa ny mahafantatra ny toerana misy anao rehefa miditra amin'ilay sehatra fifanakalozan-dresaka.
Ny fivoaran'ny angon-drakitra goavana sy ny dokambarotra manana tanjona kinendry dia manaporofo fa “tsy hoe tsy saropady” izany mihitsy ny metadata. Raha raisinao ny hoe firy ireo orinasa afaka mahafantatra ny momba anao amin'ny alàlan'ny fahafahany miditra fotsiny mijery my metadata momba anao, tsy sarotra ny mahita hoe tsy sarotra ho an'ny governemanta ny manao toy izany koa.
Vao haingana, tao anaty lahatsoratra iray tamin'ny bilaogy, i Chiang Yam Wang, kaomisera ao Hong Kong misahana ny fiainana manokana, no nanasongadina ny ahiahy momba ny tsy fahampian'ny fiarovana ny metadata an'ireo mpampiasa aterineto. Mino i Chiang fa afaka manambara bebe kokoa noho ny tena votoatim-pifandraisana ny metadata-ntsika.
Manome sary amin'ny antsipirihany, feno sy voafaritra araka ny fotoana momba ny olona mifandray amin'iza, oviana, impiry ary naharitra hafiriana, ny metadata; taizano toerana nisy ny mpiantso sy ny nantsoina, ary iza koa no hafa mbola mifandray amin'iza,sy ny maro tsy voatanisa. Araka izany dia avoitran'io ireo antsipirihany amin'ny fiainantsika manokana, politika, sosialy, ara-bola sy ara-asa.
Taraiky any aorian'ny resaka fanaovana lalàna hafa any ny faritra iasan'ny lalàna ao Hong Kong ho fitantanana ny fampiharana ny lalàna hidirana amin'ny mombamomba ny olona — ary na dia ireo eritreritra fahalemena amin'ny fiarovana ny fiainana manokana aza. Ohatra, ny Lalàna Momba ny Fiainana Manokana amin'ny Finfandraisana Elektronika ao Etazonia, na dia iharan'ny fanenjehana tsy miato momba ny fahalemeny amin'ny fiarovana ny metadata, dia nametraka fepetra ho an'ireo manampahefana mpamihatra lalàna mba ho arahana rehefa mitaky raharaha amin'ireo mpanome tolotra aterinetoizy ireny hamoahana ny metadata momba ireo mpampiasa. Na dia ilay Andalana 215 kiaina be ao anatin'ny USA PATRIOT Act aza, dia nolaniana ho setrin'ny fanafihana nitranga tamin'ny 11 Septambra, mila ny fankatoavan'ny fitsaràna amin'ny fakàna ambongadiny ireo metadata amin'ny finday. Kely finoana ireo manampahaizana manokana momba ny lalàna, indrindra fa amin'ny fitsaràna izay manara-maso ity fepetra ity — raha ny marina, hitan'ny fitsarana federaly iray ny fampiharana tsy mifanarakaamin'ny lalàm-panorenana,vao tamin'iny herinandro lasa iny. Kanefa na dia io fenitra io aza dia mihoatra noho izay atolotra ao Hong Kong.
Tsy ampy torolalanamazava ihany koa i Hong Kong raha resaka fitazonana ny angon-drakitra, olana iray izay nivoatra tany amin'ny toerana hafa manerana izao tontolo izao. Tamin'ny Martsa, nofoanan'ny mpitsaraira tao Pays-Bas ny the Dutch data retention law that requires telecom companies to store customers’ data for one year and Internet providers for six months. The judge said that while the law helps fight crime it also breaches the privacy of telephone and Internet users. In contrast, also in March, Australia passed a controversial security law that will force telecom and Internet service providers to store customers’ personal data for two years to help law enforcement combat domestic terrorism.